Shiinaha Flange Seal gasketka Gawaarida Dhaawaca Gawaarida - CIXI DongFENG SEALING & amp; PACKING Co., Ltd
Shiinaha Flange Seal gasketka Gawaarida Dhaawaca Gawaarida
Goomaatada nabarka ee muquuninta waxay ka kooban tahay "V-qaab" (ama "W-qaab") cajalad bir ah iyo cajalad aan toos ahayn, oo midba midka kale ka sarreeyo isla markaana si joogto ah u dhaawacma. Si loo dhejiyo cajaladda birta, barta ay ku bilaabanayso iyo dhammaadka labadaba waa la isku qurxiyay. Baaxadda Baaxadda ballaaran ee xaaladaha shaqada ee la aqbali karo. Waxaa loo isticmaali karaa heerkulka sare, cadaadiska sare iyo heerkulka aadka u hooseeya ama xaaladaha faakiyuunka. Beddel iskudhafka qalabka gaasku waa in wax laga qabto dhibaatada daxalka kiimikada ee dhexdhexaadinta kala duwan ...
Gaasta Dhaawaca Gawaarida leh oo ay ka buuxsantay Graphite